विनोद चौधरी, रामनारायण बिडारीहरुबाट देश रुपान्तरण होला ?
स्थापना भएको झण्डै ७० बर्षपछि नेपाली शोषित पीडित श्रमजीवी जनताको सच्चा प्रतिनिधि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । कुनै पनि प्रकारका शोषण दमनका बिरुद्ध कानुन बनाउन लागू गर्न जनतालाई सुशासन दिने कार्यभार बहन गर्ने अहम र महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी वाम सरकारले प्राप्त गरेको बर्तमान सन्दर्भमा जनताका दैनिकी गुजारा गर्ने तहका न्युनतम आधारभूत आबश्यकता परिपुर्ति गर्ने, गाँस, बास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षामा धेरै काम गर्न आबश्यक छ । बिदेशमा भएको कालोधन राष्ट्रीयकरण गर्ने, राजा महाराजा, कथित साहु महाजनको हातमा भएको अकुत सम्पती राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउन बाम सरकारले पहल गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी उद्योग धन्दा खोल्न चलाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने लगायतका बिषयतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय काम गरेका तथा राज्यको सुबिधाबाट सँधै बञ्चित भएका जनताका सच्चा अनुयायीहरुलाई महत्व दिन आबश्यक छ । तर, ब्यक्ति छनौटमा त्यस्तो भएको पाइदैन । लामो समय आन्दोलनको अगुवाई गर्ने, घर परिवार र निजी आय आर्जनमा नलाग्ने पार्टी नै सर्वोपरी हो भनी लाग्ने कार्यकर्ताको भावनामा ठूलो चोट पुगेको छ । यस सन्दर्भमा बेलैमा नेतृत्वले बुझी पछाडि पारिएका सबै कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिई समेट्न आबश्यक छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वास्तविक जनताको सम्मान चाहन्छ भने कथित अबसरका निम्ति गैह्र कम्युनिष्ट क्षेत्र या पार्टीबाट कम्युनिष्ट पार्टीमा भित्रिएकाहरुको दिनचर्या सुधार्दै पर्ख र हेरको आधारमा जाँच पडतालसहित कडा निगरानीमा अघि बढाउनु पर्छ । अबसरको लागि पार्टी चाहार्दै कालो धन लुकाउन पार्टीमा ओत बस्न आउनेहरुको उद्योग धन्दा कलकारखानाले राष्ट्रिय राजश्व र करमा कस्तो सहभागिता छ भनेर केस्रा केस्रा केलाउन आबश्यक छ । बामपन्थीको प्रगतिशील समाजवाद उन्मुख सरकारले यहीबाट आफ्नो कार्य शुरु गर्ने आशा आमजनतामा छ । तर, विनोद चौधरी, अजेय सुमार्गी, रामनारायण विडारी, नवराज सिलवाल, अयोधीप्रसाद यादव, लोकमानसिंह कार्की, सूर्यबहादुर केसी जस्ताले ठाउँ पाउने र अरुले नपाउने अबस्थाले जनता निराश छन् ।
हालै मात्र सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले रामनारायण विडारीलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय ग¥यो । विडारी कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य र वकिल भए पनि इमान्दार ब्यक्ति होइनन् । भ्रष्ट तथा माफियाका संरक्षक लोकमानसिंह कार्कीलाई अन्तिमसम्म बोकेर उनी सबैतिर दौडे । कालोधन जम्मा गरेका सुमार्गीको रकमलाई सेतो बनाउन धेरै मेहनेत गरे । उनीभन्दा धेरै इमान्दार नेता, कार्यकर्ता र कानुनका ज्ञाता भए पनि विडारीलाई नै स्थान किन ? नेताहरु बिगतको कमीकमजोरीबाट बाहिर निस्केर जनताको आशा अनुरुप काम गर्छन भन्ने अपेक्षा विडारीलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णयले तुषारापात गरिदियो । अनाबश्यक रुपमा चिच्याउने बाहेक खासै क्षमता नभएका बिडारीलाई कालोधन जम्मा गर्नेहरुको सिफारिसमा माओवादीले इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुलाई चुनौति दिन राष्ट्रियसभा पठाएको हुनसक्छ । बिगतमा समानुपातिक सांसद भएका विडारीले बारम्बार किन आरक्षण र सजिलोसँग पाइने ठूलो ठाउँ पाउँछन ? विडारीलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णयले माओवादी केन्द्रका इमान्दार नेता कार्यकर्तामाथि पक्कै पनि चोट पुगेको हुनुपर्छ । १७ हजार शहीदका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलन हाँक्नेहरु बिडारी जत्तिका रहेनछन ?
नेकपा एमालेले बिगतमा बिनोद चौधरी, राज्यलक्ष्मी गोल्छा लगायतलाई समानुपातिक सांसद बनायो । चौधरी अहिले कांग्रेसमा पुगेर सांसद भइसकेका छन् । एमालेमा चर्काे विरोध र सांसद नबन्ने भएपछि उनी कांग्रेस पुगेका हुन । देशको एक मात्र खर्बपती भन्दै गफ गर्ने चौधरी करको मामलामा भने अन्य ब्यक्ति र उद्योग घरानाभन्दा धेरै पछि छन् । खर्बपतिको यात्राको क्रममा उनले धेरैलाई धोका दिए । सबैभन्दा बढी धोका राज्यलाई दिइरहेका छन् । कर छली गरेर । कर छल्नकै लागि उनी कहिले कुन कहिले कुन पार्टीमा पुगेर सांसद बनिरहेका छन् । एमालेले चौधरीजस्ता ठाउँ दिएपछि देशैभर निराशा छाएको थियो । अहिले चौधरीजस्तै नभए पनि प्रहरी फोर्समा बसेर सुख चयन भोगेका र बिबादास्पद नवराज सिलवाललाई एमालेले सांसद बनाएको छ । कीर्ते कागजातमा फसेका भनिएका सिलवाललाई सांसद बनाउनु पक्कै पनि राम्रो काम होइन । अझ कति त हल्ला गर्छन, उनी मन्त्री हुने रे । बोकाको मुखमा कुभिण्डो भनेजस्तै सांसद नै बनाउन नहुने ब्यक्तिलाई सांसद बनाइयो । अझ माथिको पद पनि चाहिने रे । हुनै सक्दैन । दिनु हुँदैन । सरकारले यदि अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी दियो भने आमकार्यकर्ताको भावनामा चोट पुग्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै सिफारिसमा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । तर उनले कांग्रेस र भारतको इशारामा निर्वाचन नतिजा प्रकाशित गर्नदेखि धेरै काममा ढिलासुस्ती गरे । कम्युनिष्ट पार्टीको भन्दा अन्यको चाकडी गरेर उनीहरुको इशारामा काम गरे । तर अन्तिममा तिनै बामपन्थी नेताहरुसँग निर्वाचन आयुक्तभन्दा माथिल्लो पद उपराष्ट्रपति मागेको कुरा आयो । ती पद दिन नसकेमा राष्ट्रियसभा भए पनि हुन्छ भन्ने खबर पठाए । दिनु हुदैन थियो, दिइएन ठीकै भयो । तर, उनले यसअघि नै फाइदा लिइसके । बुहारीलाई माओबादीबाटै प्रदेश सांसद बनाइसके । नेताहरुले लोकमानसिंह कार्कीलाई बोकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाए । पछि तिनै नेताहरुको पहलमा हटाउनु पर्ने अबस्था आयो । नेताहरुले गल्ती सच्याए, राम्रै भयो । तर फेरि पनि गल्ती गर्दैछन । दोहो¥याई दोहो¥याई गल्ती गरेपछि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, विगतमा पार्टी व्हिप उल्लंघन गरेर मतदानमा अनुपस्थित रहने एमाले कोटाकी सांसद् राज्यलक्ष्मी गोल्छाको पार्टीविरोधी गतिविधि कार्यकर्ताको मानसपटलमा ताजै छ । पोखराका धनाढ्य सूर्यबहादुर केसी वाम गठबन्धनबाट सभासद् हुने नदेखेपछि कांग्रेसमा प्रवेश गरी सांसद् बने ।
चौधरी, गोल्छा, सुमार्गी, सिलवाल, विडारी, केसी जस्तालाई अबदेखि स्थान दिन आबश्यक छैन । यस्ता ब्यक्तिहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको बेइज्जत मात्र गर्छन । सरकारले गर्न खोजेको सुशासन र समृद्धिको अभियानलाई तुहाइ दिन्छन । जसको पहिचान र ज्ञान नै कुशासन र छली छ, त्यस्तालाई किन स्थान दिने ? अब दिनु हुदैन । बिगतको जस्तो गल्ती नगर्ने अबस्था सिर्जना गर्न हामी सबै कार्यकर्ताहरु एकजुट हुन आबश्यक छ । त्यसो भएमा पक्कै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल बन्नेछ । (लेखक नेकपा एमाले कास्की जिल्ला निर्वाचन कमिटीका अध्यक्ष हुन ।) समयबद्ध साप्ताहिकबाट